Global Voices teny Malagasy » Sodàna: Hiteraka fanjakana vaovao ve i Afrika amin’ny 2011? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Janoary 2011 8:26 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika zhhantar
Sokajy: Afrika Mainty, Sodàna, Fifidianana, Politika
Hiteraka fanjakana vaovao ve i Afrika amin'ny 2011? Hanao fitsapan-kevi-bahoaka i Sodàna Atsimo na hoe hijanona na tsia ho faritr'i Sodàna izy amin'ny 9 Janoary 2011 araka ny ao anatin'ny Fifanarahana Ankapobeny ho amin'ny Fandriam-pahalemana tamin'ny 2005 teo amin'ny governemanta foibe ao Khartoum sy ny Hetsi-panafahan'ny Vahoaka ao Sodàna. Fitsapankevi-bahoaka iray koa no hatao amin'io fotoana io ihany any Abyei  mikasika ny hoe ho lasa faritr'i Sodàna Tatsimo na tsia. Ireto misy fehina lahatsoratra miresaka an'i Sodàna eo amin'ny sampanan-dalan'ny tantara.
Miresaka mikasika ny olana mifandray amin'ny fitsapankevi-bahoaka sy ny vahaolana azo raisina i Wolfram Lacher, mpikaroka mikasika an'i Sodàna sy ny Tandrok'i Afrika:
Nalamina ho sehatra efatra ny fifanarahana, izay ny tsirairay amin'izy ireo dia iandraiketan'ny vondron'asa ahitana ny solontenan'ny andaniny sy ny ankilany: Ny zo ara-piarahamonina, ny fiarovana, ny ara-toe-karena, ny Ara-bola sy ny Harena voajanahary, ary koa ny Fifanaharana Iraisam-pirenena sy ny resaka Lalàna. Ahitana ny fifanarahana fizarana ny tamberim-bidy ampidirin'ny solika aondrana ny teboka fototra amin'ny fifampiraharahana; ny zo sy ny adidin'ireo mponina manodidina ny sisintany iraisana (ahitana ny zo hanana trano, asa, varotra, ary ny fampiasana tany); ny vola sy ny trosa nasionaly; rano ary fifanaraham-piarovana. Fanampin'izany, ny olana roa izay tsy ao anatin'ny fifampiraharahana amin'io sehatra io nefa tena manan-danja tokoa amin'ny hoavin'ny fifandraisan'ny atsimo sy avaratra: ny famaritana ny tsipiky ny sisintany iombonana, ary ny sàtan'i Abyei.
Miaro ny heviny izy fa  hoe mety hiteraka herisetra ny fitsapankevi-bahoaka any Abyei. Faritra any Sodàna i Abyei  ary manana “sata ara-taratasy manokana,”
Nisedra fahatarana raha oharina amin'ny fitsapankevi-bahoaka tamin'ny fahaleovan-tena ny fanomanana ny fitsapankevi-bahoaka ho an'i Abyei, ary tena voakiana mafy mihitsy ny mason-tsivana hahafahana mirotsaka ho an'ny mpifidy. Vokany, mitombo ny ahiahy na ho vita ara-potoana ihany ny fifidianana na tsia, ary lasa teboka iray tena tsy maintsy hifampiraharahana mihitsy ny momba an'i Abyei. Tamin'ny volana Septambra, dia nanome sosokevitra ny NCP hoe tokony hofoanana ny fitsapankevi-bahoaka any Abyei ary tokony havadika ho faritra tsy misy miaramila ny toerana ka hanana zom-pirenena roa ireo monina ao. Nolavin'ny SPLM ny soso-kevitra, tsy kely indrindra satria mety hahatonga ny fialàn'ny iray amin'ireo tena ain'ny CPA izany, ary mety hiteraka fanontaniana mikasika ny fitsapankevi-bahoaka momba ny fahaleovan-tena mihitsy. Na izany aza, mety hiteraka zava-tsoa ny vahaolana ifampiraharahana mba hamahàna ny fifamaliana any Abyei. Tena mety hiteraka herisetra any an-toerana ny fitsapankevi-bahoaka. Tsy hoe miparitaka eran'ny firenena fotsiny ny ady (mifandray amin'ny resaka tany misy solika any Abyei) fa indrindra vanja miotrika ho any ao an-toerana, faritra izay mbola olana koa ny zo honina sy hampiasa ny tany ho an'ireo vondrona roa – ny Ngok Dinka (toerana amaharan'ny SPLM) sy ny Misseriya (foko Baggara).
Manoratra mikasika ny solika sy ny fitsapankevi-bahoaka  i Luke A. Patey, Mpikaroka amina tetikasa ao amin'ny Ivontoerana Danoa ho an'ny Fianarana Iraisam-pirenena:
Mbola misy telovolana sy herinandro iray mandra-pahafahan'ny olona any Sodàna Atsimo hifidy ny fahaleovantenany. Mitombo ny tahotra fa mety hisy ny ady solika. Nefa tokony halamina izany tebiteby izany. Tsy hisy mihitsy ny ady eo amin'ny tafika tatsimo sy tavaratra any amin'ny faritry ny sisintany manankarena solika eto amin'ny firenena. Ankoatr'izany, tena mametraka ahiahy lehibe mihitsy ny fifanjevoana noho ny korontana anatin'ny antoko any Atsimo sy ny fanoheran'ny tafika any amin'ny faritra manana solika.
Nandrehitra ady sivily nihoatra ny roapolo taona teo amin'ny Atsimo sy ny Avaratra ny solika teo aloha izay nahafatesana roa tapitrisa mandrapahavita sonia ny Fifanarahana Ankapobeny ho amin'ny Fandriam-pahalemana tamin'ny taona (Comprehensive Peace Agreement) 2005. Hatramin'izay dia nipetraka tsara ny fandriampahalemana, ny National Congress Party (NCP) ny Avaratra ary ny mitovy laharana aminy tany amin'ny faritra Atsimo, tsy hahita tombony amin'ny fanapahana ny fidiram-bolany isan-taona avy amin'ny solika ka hiverina hanangana ady ny Hetsi-panafahan'ny Vahoaka ao Sodàna. Na dia heverina ho efa azo antoka aza ny fisintahan'ny Tatsimo, rehefa tonga eo amin'ny resaka solika, dia tsy maintsy hifamatotra ho iray indray ny Atsimo sy ny Avaratra mandritra ny taona maro ho avy.
Milaza izy fa  mety ho antony iray mampisara-bazana ny solika ao anatina Sodàna Atsimo mahaleotena :
Mety ho antony iray tena mampisara-bazana amin'ny ady fitondrana ao anatina Sodàna Atsimo mahaleotena ny solika. Nifandona tao Bentiu ny volana Oktobra farany teo ny tafika mitampiadioana mpikambana ao amin'ny SPLM , ny governoran'ny Fanjakana tokana Taban Deng sy ny Jeneraly Paulino Matip. Manana fifamatorana akaiky amina orinasan-tsolika Amerikana Jarch Capital i Matip, izay raha ny hevitry ny TaleJeneraliny, i Phil Heilberg, dia manantena ny hanararaotra ny ‘fiovàna sata ara-panjakana’ any Sodàna. Mijoro mifanohitra amin'ny an'ireo orinasa hafa nanao sonia niaraka tamin'ny governemanta Tatsimo ny fangatahan'ny orinasa Jarch. Tsy ho ela dia mety hiatrika ny ady avy ao anatiny ihany ireo mpihoko tao Sodàna Tatsimo mahaleotena.
Tantara mitovitovy amin'ny ano amin'ny Delta du Niger ahitana ady mafàna eo amin'ny vondrona mitam-piadiana eo an-toerana sy ny tafi-piarovan'ny governemanta no hita soritra any amin'ireo faritra misy solika ao Sodàna . Sinoa mpiasan'ny solika efatra no maty tamin'ny taona 2008 nandritra ny andrana famonjena nataon'ny manam-pahefana Sodàne taorian'ny nakana an-keriny ireo mpiasa teo akaikin'ny tananan'ny solika any Heglig. Nahita tombony kely avy amin'ny solika ny vahoaka eo an-toerana.
“Tsy misy intsony antony hanoherana ny valin'ny fitsapankevi-bahoaka,” hoy i Reverend Sam Kobia:
Tsy misy intsony antony hanoherana ny valin'ny fitsapankevi-bahoaka. Tsy hanaiky mihitsy ny Avaratra hoe hisaraka ny Atsimo, ny Atsimo kosa dia tsy hanaiky valiny tsy manome azy ny fisarahana, ary dia noho izay no hisian'ny fifandirana. Amin'izao fotoana izao, tsy misy mekanisma mazava intsony mikasika ny fomba hamahana ity fifandirana ity. Ity no hafatra iray apetratsika ho an'ny Troika, izay mpiantoka ny CPA; apetratsika izany ho an'ireo mpandray anjara rehetra avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny sehatra iray hafa dia ny fandriampahalemana. Raha tsy misy fandriampahalemana dia hitan'ny olona ho tena sarotra tokoa ny handray anjara marina amin'ny fitsapankevi-bahoaka. Amin'izao fotoana izao, 5 kilometatra monja [3 miles]no manasaraka ny andian-tafiky ny Atsimo sy ny Avaratra. Mila arovana iny sisintany iny, mila asiana faritra tsy azo ihoarana, amin'izay isika tsy hahita an'ireo miaramila ireo hifanatri-tava . Ny vaovao azontsika avy any an-toerana dia hoe misy fanetsehana andian-tafika izao — na ny olona aza dia milaza izany aminay, toy ny fiangonana.
Manoritra  faritra mena (mafàna) any Atsimon'i Sodàna izy:
Nahita faritra mena ihany isika nony farany isika, izay mety hirehetan'ny herisetra aorian'ny fitsapankevi-bahoaka, na mandra-pahatongantsika any. Eo amin'ny sehatry ny tetezamita, ambara fa hisy fitsapankevi-bahoaka any Abyei [is], saingy tsy nisy komitin'ny fitsapankevi-bahoaka natsangana kosa anefa any. 100 andro latsaka sisa tavela, dia ho sarotra ny hisian'izany. Faharoa, any Atsimon'i Kordofan , ny Tendrombohitr'i Nuba , ary i Blue Nile — dia hanomboka ny fakana ny hevitry ny mponina izay heverina ho tanterahan'ireo mpikambana voafidin'ny antenimiera mpanao lalàna. Nefa any Blue Nile, an'ny governemantan'i Al-Bashir NCP [ny antokon'ny mpitondra ao Khartoum] ireo voafidy ireo; tsy afaka maneho ny tena hetahetan'ny olona izy ireo.
Nahita i Ola Diab fa hanetsika ny fahamarinam-pototry ny Afro-Arabo ilay fitsapankevi-bahoaka:
Manozongozona ny fahamarinam-pototra Afro-Arabo io fitsapankevi-bahoaka io. Raha manapa-kevitra ny hihataka ny Atsimo, dia tsy handroso tsy hihemotra ara-toe-karena daholo ny roa tonta. Betsaka amin'ireo solika Sodane enimpolo tapitrisa barila no mandry any atsimo saingy ny tambajotram-pizarana dia any avaratra, izay no mahatonga ireo faritra roa amin'ny firenena ireo hifampiankina ara-toe-karena. Tena anjakan'ny fientanam-po loatra ny fitsapankevi-bahoaka na ho an'ny tatsimo na ho an'ny tavaratra ka mety hitarika ady ho azy ireo indray noho ny tsy fahampian'ny fanazavana eo amin'ny satan'ny fizakana zom-pirenena, ny fitsinjaràna ny harena, ny sisintany ary ny faritry misy solika. Mety ho tontolo iaingan'ny fangatahana fisarahana ataon'ny faritra hafa any Sodàna ihany koa ny fihenjanan'ny faritra atsimon'i Sodana manoloana ireo sisa tavela. Efa am-polotaonany maro ny faritra tahaka an'i Nile Ambony, Abeyi, Kordofan tatsimo, sy Darfur ary ny ambiny amin'ny faritra andrefana, toy ny Atsimo, no efa nanakiana ny governemanta Sodane mikasika ny tsy firaharahiana azy ireo sy ny fanavakavahana.
Manontany tena i Ensent raha vonona ny hanaiky mpiray vodirindrina vaovao ny Etiopiana na tsia:
Azo antoka aloha fa hiteraka fanjakana vaovao ho an'i Afrika ny fitsapankevi-bahoaka izay hatao amin'ny herintaona any atsimon'i Sodàna, na dia mbola feno sakana maro tsy maintsy lalovana aza alohan'ny hahatongavan'izany ho tena zava-misy tokoa. Fa vonona ve anefa ny Etiopiana handray fanjakana vaovao eo andrefany sy izay rehetra tonga miaraka amin'izay, ny tsara sy ny ratsy?
Farany, miresaka mikasika ny fikarohana anarana vaovao  eo amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Juwama vs. ny Repoblikan'i Nile – mitady anarana vaovao i Sodàna Atsimo” i Andrew Heavens:
Inona no ho ao anatin'ilay anarana? Anarana tena ara-koltoraly sy nasionaly raha toa ianao ka avy any atsimon'i Sodàna mpamokatra solika.
Fito volana latsaka miala amin'ny fitsapankevi-bahoaka sisa ny faritra any Sodàna Tatsimo mikasika ny hoe tokony hisaraka na tsia izy ka hanangana firenena vaovao eto Afrika.
Iray amin'ireo fanontaniana lehibe tsy nahitam-baliny mihalohalo amin'ny fifidianana ny hoe iza no mety ho anaran'ilay firenena vaovao raha, araka ny efa nandrasan'ny rehetra, hifidy ny hihataka ireo tatsimo efa sorena.
Ny safidy mora indrindra aloha dia ny manaraka ny antsoin'ny olona amin'izao fotoana izao hoe— Atsimon'i Sodàna na Sodàna Tatsimo.
Nefa misy ihany koa ireo olana sasany momba ny laza. Mitenena “Sodàna” amin'ireo vahiny dia hihevitra avy hatrany lisitra zava-doza ry zareo — Darfur, ady sivily teo amin'ny tatsimo-tavaratra tsy misy fiafarana, fanonganam-panjakana, fiqndaniana sy trosa mitambesatra.
Tsara amin'ny firenena vaovao ny manana anarana vaovao sy fitantanana madio.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/01/05/11599/
 Hanao fitsapan-kevi-bahoaka i Sodàna Atsimo : http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Sodànaese_independence_referendum,_2011
 Fifanarahana Ankapobeny ho amin'ny Fandriam-pahalemana tamin'ny 2005 : http://en.wikipedia.org/wiki/Naivasha_Agreement
 Miresaka mikasika ny olana mifandray amin'ny fitsapankevi-bahoaka sy ny vahaolana azo raisina : http://blogs.ssrc.org/Sodàna/2010/10/06/negotiating-southern-independence/
 Manoratra mikasika ny solika sy ny fitsapankevi-bahoaka: http://blogs.ssrc.org/Sodàna/2010/10/04/oil-and-Sodànas-coming-referendum/
 hoy : http://blog.sojo.net/2010/11/05/looking-towards-south-Sodànas-referendum/
 Nahita i Ola Diab fa : http://oladiab.wordpress.com/2010/11/07/no-return-to-Sodàna/
 Manontany tena i Ensent : http://www.enset.org/2010/10/witnessing-birth-of-new-nation.html
 miresaka mikasika ny fikarohana anarana vaovao: http://www.meskelsquare.com/archives/2010/06/juwama_vs_the_n.html